Ady amin’ny asa ratsy sy hosoka :: Mihatra ny fanapahana an’ireo finday tsy manana laharana IMEI • AoRaha
Ady amin’ny asa ratsy sy hosoka Mihatra ny fanapahana an’ireo finday tsy manana laharana IMEI
Taorian’ny fanentanana dia miditra tanteraka amin’ny fanapahana ny fifandraisana ho an’ireo finday hosoka na tsy manana laharana IMEI ny Antokon-draharaha mandrindra ny teknolojian’ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara (Artec). Tsy afaka hiantsoana sy handefasana hafatra intsony ny finday rehefa misy ny fahatapahana noho io antony io.
« Efa nanomboka ny fanapahana ny fifandraisana tamin’ ireo finday tsy misy IMEI izahay. Hatramin’ny 30 jona lasa teo no fe-potoana nomena ny mpampiasa finday », araka ny nambaran’ny teknisianina miandraikitra ny fampanarahan-dalàna sy fankatoavana ny fitaovana eo anivon’ny Artec.
Raha tsiahivana dia nisy ny lalàna navoakan’ny minisite­ran’ny Paositra, fifandraisan-davitra sy fampandrosoana nomerika tamin’ny volana janoary 2018 momba ny fandrarana ny fampidirana eto Madagasikara ny finday tsy misy tarehimarika manokana amin’ny maha ara-dalàna azy na nu IMEI.
Nisy hetsika natao teto an-drenivohitra nijerena an’ireo finday hosoka sy tsy ahitana an’ilay tarehimarika manokana. « Ho fanafoanana ny fivarotana ireny finday hosoka ireny eto Antananarivo no tanjona. Finday miisa dimy arivo mahery no efa tratra tao anatin’izany hetsika izany », hoy hatrany ny fanampim-panazavana.
Etsy an-kilany, nilaza ireo mpivarotra fa tsy nisy ny fampandrenesana sy fanazavana nataon’ny teo anivon’ny Artec ny amin’ny fanapahana fa avy hatrany dia nihatra ilay fepetra. Hiara-hiasa amin’ny fadintseranana kosa ny Artec amin’ny fanaraha-maso an’ireo entam-barotra hosoka tokony tsy hiditra eto amin’ny Nosy intsony.
Aro loza amin’ny faritra avo :: Hotsirihina ny toetoetran’ireo vatobe eny Manjakamiadana
Fanamboaran-dalana :: Hosorohana ny fahatapahan’ny fifamoivoizana mandritra ny asa